दार–एस–सलामदेखि माडागास्कर- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
६ दिन ७ रातमा सकिएको हिन्द महासागरको यात्रा । पानीजहाजको एक साइडमा बसेका खसीबाख्रा र अर्को साइडका गाई–गोरुहरू साक्षी । र, म– रुवान्डा, बुरुन्डी हुँदै तान्जानियाबाट कोमरोस छिचोल्दै माडागासकर जान लागेको एक नेपाली यात्री ।
जेष्ठ २५, २०७६ नाेयल बास्ताेला
२०११ जुलाईको पहिलो साता । यात्राका केही साथी छन् । रुवान्डाको ब्रासिएस मन्याङगेरी । हुतु बुबा र तुत्सी आमाको टुहुरो छोरा । तान्जानिया बसेर पढेको, अंग्रेजीमा दख्खल भएको । मायोटीमा बसेकी प्रेमिकालाई कमरोसको अन्जुवानमा भेट्न जान लागेको ।
यात्राको अर्को साथी मालबाहक पानीजहाजको कप्तान किमरो । जहाजको कुक जुमा । अन्य केही चालकदलका सदस्यहरू । तान्जानियाबाट समुद्रको बाटो कोमरोसको मरोनीमा व्यापार गर्न हिँडेका बुरुन्डी र युगान्डाका केही युवा । मरियम– समुद्री मालबाहक जहाज । ६ दिन ७ रातमा सकिएको हिन्द महासागरको यात्रा । पानी जहाजको एक साइडमा बसेका खसीबाख्रा र अर्को साइडका गाई–गोरुहरू साक्षी । र, म– रुवान्डा, बुरुन्डी हुँदै तान्जानियबाट कोमरोस छिचोल्दै माडागासकर जान लागेको एक नेपाली यात्री ।
हो, मन्याङगेरी हो तिमी फेरि सपनामा आएर भन्दै थियौ– पश्चिममा आधारित प्रणाली डराउनेहरूको एक समूह हो । यसलाई पाताल भन्ने महाविद्वान्हरू पनि यही संसारमा छन् । यसको गरिमा गाउँदै हिँड्ने वरिष्ठ लेखक पनि यही छन् । अरूको गुणगान गाउँदै, सपना बाँड्दै हिँड्ने तर काम र कुरो एकतिर गर्ने राजनीतिज्ञहरू पनि यहीँ छन् (हामीलाई भन्छन् यान्की गो होम तर, आफैं यान्की बन्दै उही खाडलमा होमिन्छन्) तर, हामीलाई कसैले प्रेम गर्दैनन् । उचाल्छन् र खिस्स घाँटीबाट मुस्कुराउँछन् । अनि भन्छन् तिमीहरू त बहादुर हौ । फुस्ल्याउँछन् र सबै कुम्ल्याउँछन्, शोषकहरूले झैं । के हामी गरिब हौँ त ?
तिमी मेरो सपनामा बडबडाउँदै थियौ । अनि अचानक चिच्यायौं सपनामा जस्तै विपनामा पनि । किन देखापर्छन् तिम्रो मस्तिष्कमा ती नामहरू ?
डा. लिभिङ स्टोन, हेनरी मोर्टन स्टान्ले त्यसै जन्मेका होइनन् भन्दै थियौ तिमी । यिनीहरूलाई त पठाइएको हो रे, उपनिवेशका मोहोरा बनाइएका हुन् रे । उपनिवेश सभ्यताको महान् गीत यही माटोमा फुलाइएको रे ।
ओहो कति गहिरो थियो, कति पीडादायी थियो तिम्रो आर्तनाद । आँखाका आँसु रित्तिएर, मुखको थुक सुकाएर तिमी केही भन्न खोज्दै थियौ ? तिमी के भन्न खोज्दै थियौ ? म सपनाको कल्पनाले उत्तेजित हुँदै थिए । अचानक मैले सुनें । तिमी सकिनसकी बरबराउँदै थियौं– सही हो नोयल सही हो । त्यो कालो कविले लखेको रंगीन कविता सुन्दर बुट्टामा भरिएको थियो । साँच्चिकै त्यो कवि थियो । नाइलको झिलमा पौडिने त्यो कवि, उभिराका पहाडबाट तागंनिकाको अथाह गहिराइ नाप्दा नाप्दा आफैं डुबेछ । कता हरायो त्यो कविको कालो देह, कता हरायो त्यो कविको अन्तरआत्मा !
म फेरि झस्किएछु ।
तिम्रो नाम लिँदै बरबराउँदै थिएँ । यस मन्याङगेरी यस, तिमी सही थियौ म पनि गलत थिइनँ । भर्खरै हेर न, नियम र कानुनहरू बनाइएका छन् । शक्तिबाट झूटोलाई सत्यमा परिवर्तन गरिँदै छ । अफ्रिकालीहरूले आफ्नो नायक खोजेका छन् ।
मेरो कुरै नसुनीकन मन्याङगेरी चिच्याउँछ । मरोनी अब छिट्टै आउँछ । हो किमारो हो म अफ्रिकन हुँ । म काले हुँ । मेरो कपाल नै कालो छ । म हुँ रास्ताम्यान । म गर्वका साथ भन्छु म काले हुँ । श्वैतश्यामल दन्त्यकथामा वीरताका साथ हराउने वीर लडाकु हुँ म ।
हो किमारो हो । पश्चिमेलीहरू अब छिट्टै यहाँ काम गर्न आउनेछन् । तिमी ठूलो जहाज बनाउँदै छौ ।
पश्चिमेलीहरू त्यही जहाज चढेर यहाँ आउनेछन् । म कुनै धर्म मान्दिनँ । मानवता नै मेरो धर्म हो । सेरनगेटीमा जनवारको मातृत्व हो मेरो– धर्म । के जनावरहरूको धर्म हुन्छ ? धर्म त भोको पेटलाई मात्रै थाहा हुन्छ । भोको पेटलाई धर्म सिकाउन किन आउँछन् धर्म प्रचारकहरू ? के धर्मलाई मात्रै थाहा छ र शान्ति, आत्मज्ञान ? मैले सोधें मसाइकी ती नवयुवतीको मातृत्वसँग जो आफ्नो बालकसँगै झुपडीमा उभिएकी थिइन् ।
जनावरहरू पनि जीवन त बाँचिरहेका छन् । उनीहरू पनि सुख र दुःख भोग गरिरहेका छन्, श्वास लिइरहेका छन् । त्यतिमात्रै कहाँ हो र एउटै सूर्यको उज्यालोमा र चन्द्रमाको शीतल छायामा मग्न भएर बाँचिरहेका छन् ।
अचानक म झस्किन्छु । सिलिङमा एकतमासले पंखा घुमिरहेछ । त्यो पंखा मैमाथि खसेजस्तो आभास हुन्छ । आकाश खस्यो भने के होला भन्ने कल्पनाले म डराउँछु । त्रसित हुन्छु र फेरि निदाउन पुगेछु । सपनामा पनि कति धेरै सपना देखेको ? यो कस्तो सपना ? के सपनाका सपना पनि सम्झनयोग्य हुन्छन् ? सपनाको सपनालाई पच्छ्याउँदै म दौडिरहेछु । अनि अब म बोल्न थाल्छु ।
हो किमारो हो । हो मन्याङगेरी हो । हामी कालो हुनुमा हामी गर्व गर्छौं किनकि हामी प्रकृतिलाई माया गर्छौं । हामी त सभ्यताको पाठ जंगलमा पढ्छौं अनि सभ्यताका महान् विद्वान्हरू पठशालाका किताबहरू बोकेर हामीकहाँ आउँछन् । तिनीहरूको रगत यति सफा छ कि हामीकहाँ आउँदा विभिन्न किसिमका भ्याक्सिन लगाएर आउने गर्छन् । फेरि मन्याङगेरी बोल्न थाल्छ, ‘कालो रातमा तिनीहरू टल्किन्छन् । तर हामी कालो रातमा हराउँछौं । अन्धकार पनि हामीसँग डराउँछ ।
तर, तिनीहरू अन्धकारलाई पनि गोली ठोक्छन् । अँध्यारो रातमा उज्यालोको खोजीमा तिनीहरू बम बर्साउँछन् । अनि ती कविहरू लेख्न थाल्छन् : अफ्रिकाको डायरी, अनि ती पत्रकारहरू कुपोषणमा जन्मिएका बालकहरूलाई तस्बिरमा कैद गर्छन् । बालक गुमाएर भावशून्य भएका आमाका आँखाहरू तिनीहरूका लागि हेडलाइन बन्ने गर्छन् । अंगालोमा बाँधिएका प्रेमी–प्रेमिकाहरू तिनका लागि वेश्यावृत्ति गरिरहेका बनिदिन्छन् । सैनिकका भीमकाय आँखा तिनहरूका लागि संसार हेर्ने नयाँ चस्मा बनिदिन्छ ।
हाम्रो आमाशयमा गोली र सभ्यताको अपाच्य खाना पसाइन्छ । जंगलबाट आउने मोहक बतासमा उनीहरू रोगका कीटाणु देख्छन् र बतासमा मिसाउँछन् बारुदको तिख्खर गन्ध । तर उनीहरूलाई थाहा छैन, हामी अझै पनि खुला आकाशमा रामाउँछौं । तर तिनीहरू चाहन्छन् सभ्यताको नाममा हामी कैदी बनिदिऊँ । घरभित्र लुकेर बसेका तिनीहरू भन्छन् हामी शक्तिशाली छौं । अनि कल्पना गर्छन् सुन्दर इतिहासको ।
के इतिहासभन्दा माथिको सभ्यता पनि पढाइन्छ र ? तिनीहरूको सभ्यताको भारी बोक्ने गधा बनिदिन्छौं हामी ।
मौनता भंग गर्दै किमारोको बाक्लो ओठ मुस्कुराउँछ । मरियमले आफ्नो रफ्तार केही कम गर्छे । ढोकामा देखिएको नवआगुन्तक मुस्कुराउँदै सोध्छ, कोमरोस कहिले आउँछ ? ‘हिँडेपछि आउँछ, आउँछ अवश्य नै आउँछ,’ मरियमको ह्यान्डल घुमाउँदै किमारो मुस्कुराउँछ (हिन्द महासागरका ज्वारहरू जुलाईको भेलमा उर्लिएर आउन थाल्छन्) ।
सेता दाँत देखाउँदै किमारो फेरी सुरु हुन्छ । ‘तिनीहरूका सपना सेता हुन्छन् । हाम्रा सपना काला हुन्छन् । तर, हामी मृत्युवरण गरिदिन्छौं र पो तिनीहरू अमर हुन्छन् इतिहासका किताबमा । लुटेर खान भन्दा लुटाएर खुवाउनको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ ।’ तिम्रो त्यो बियरको स्वागतले म प्रवाभित भएको होइन– म त प्रवाभित एउटा गरिब देशको नागरिकले गरिब देशको नागरिकलाई सम्मान गरेकोमा भएको हुँ । हामी सबै मानव हौं होइन त ? फेरि त्यहाँ गरिब र धनीबीच भेदभाव किन हुने गर्दछ ?
मलाई सपनाबाट बिउँझाउँदै किमारो फेरि भन्छ– ‘ट्राभलिङ इज ब्युटिफुल । लिभिङ इन द सेल । वाकिङ ओन द रोड ।’ किमारोको कुरा सुनेर म त मुस्कुराउन पो थालेछु ।
‘एस माई फ्रेन्ड्स एस । बिसाइदिऊ जीवनका अध्यायहरू यो अथाह सागरमा । कुँजिएका ज्वारहरूमा फैलाइदिऊ मीठो बास्ना, तिनीहरू धेरै भोका छन् ।’
किमारो अझै बोल्दै जान्छ– ‘हामी के नै गर्न सक्छौ र ? न त हामीसँग धर्तीको शक्ति न त हामीसँग अर्ती दिने बुद्धि छ । हाम्रा विलौनासँग यिनीहरू लड्न सक्दैनन् । मन्याङगेरी तिनीहरूलाई भनिदेऊ हाम्रोजस्तो प्रेम तिनीहरूले बाँड्न सक्दैनन् । साङ्ग्लोमा बाँधिएको तिनीहरूको प्रेम हाम्रोभन्दा स्वतन्त्र छ । डरको साङ्ग्लोले आफैंलाई बाँध्ने तिनीहरू हामीहरूलाई पाशविक साङ्ग्लोमा बाँधेर राख्न खोज्छन् । किनकि हामी त जनावर हौं । रिस उठाए भने प्रतिकार गर्दछौं । भोक लागे खान खोज्छौं, छलकपट आउँदैन हामीलाई । हामी त कंगो, नाइल, जाम्बेजी, रुभुमजस्तै बग्छौं । किन रोक्न खोज्छन् यिनीहरू बगेको पानीलाई ।
किमारोका यी वचन सुनेर मन्याङगेरीका आँखाहरू भरिन्छन् । आँखाका डिलमा पुगेका आँसुलाई आँखाभित्रै पठाउँदै मन्याङगेरी लामो श्वास तान्छ । बोल्न खोज्छ तर बोली उसको घाँटीमै कतै रोकिन्छ उसका आँखामा आँसु रोकिएजस्तै । आँखाभरि मायाको पातालो संसार बोकेर ऊ मायोटीतिर उडेजस्तो अनुभव गर्छ ।
हिन्द महासागरका हिच्कोले खाएका ज्वारभाटाहरू अब शान्त बन्ने प्रयास गर्छन् । क्षितिजको घाम डुब्दै जाँदा पूर्वमा जुनेली रात लिएर कोही उदाउँदै थियो । गाढा नीलो सागरमा क्षितिजको लालिमा प्रस्ट देखिन्थ्यो ।
मौनताको श्वास हामीले लिन पाएकै थिएनौं ।
अचानक देखिएका सागरका तरंगले मरियमको मौनतालाई भंग गरे ।
कोही चिच्यायो– समथिङ फल डाउन ! समथिङ फल डाउन !!
त्यो चीत्कारको आभालाई पच्छ्याउँदै हामी तल हेर्न थाल्यौ । बाख्राहरू नुनिलो पानीको स्वाद लिन तर्सिरहेका थिए र हिन्दको त्यो अथाह गहिराइलाई एकोहोरो हेरिरहेका थिए । गाई–गोरुहरू पनि एक अर्कालाई सिङले घोच्न छाडेर शिथिल भएका थिए ।
हामीले छिट्टै नै एकअर्कासँग बिदा माग्यौं । यो कस्तो निद्रा हो सपनामा पनि निदाउने ?
भोलिपल्ट मरोनीबाट कार्तला देखिसकेका थियौ । न केही खासखुस न केही गुनगुन । सबै आ–आफ्नै थकाइ र निराशामा मरोनीको कार्तलालाई इसारा गरिरहेका थिए र गन्तव्यको आगमनमा मुस्कुराउने कोसिस गर्दै थिए ।
जुमा आएर मेरो निद्रा भंग भयो । मेरो निद्रा भंग गरेकोमा उसले मुस्कुराउँदै भन्न थाल्यो, ‘तिमीलाई थाहा छ ? हिन्द महासागरमा कार्तला किन यसरी उभिएको ?’ जुमाको कुरा सुन्दै नसुनी म आफ्नो कल्पनामा फेरि हराएछु । कास म पनि जुमा जस्तै सधैं मुस्कुराउन सक्दो हुँ ?’ जुमा कतिखेर आयो कतिखेर गयो मैले पत्तो पाइनँ ।
मभित्र अझै पनि मन्याङगेरी र किमारोको ह्याङओभर बाँकी थियो । किमारोको भन्दा मन्याङगेरीका यादहरू कडा थिए, समुद्रको नुनिलो पानीजस्तै ।
मन्याङगेरीलाई सम्झिँदै म बडबडाउन थालेछु । ‘मन्याङगेरी, तिमी त सपनाको समुद्रमा पनि पौडिन सक्ने कुशल पौडीबाज हौ । को सक्छ र यहाँ पौडिन ? कविहरू त कल्पनामा पनि गोता लगाउन सक्दैनन् । मदिराको उन्मादमा पनि लेखकहरू तिम्रो भावना बुझ्न सक्दैनन् तैपनि लेखेजस्तो गर्छन् तर, तिनीहरू सभ्यताको पार्टीमा तिखो स्वरमा चिच्याउँदै मुस्कुराउँछनु– द अफ्रिकन फुल । रंगमञ्चका दर्शकले तालि बजाएजसरी पार्टीमा आवाज गुन्जन्छ– बट वी लभ अन्डरडग ।’
फेरि पनि म भन्छु तिमी त साँच्चिकै मनमोहक मादकता बोकेर फुल्ने अफ्रिकन फूल हो । तिम्रो नाममा शब्दहरू ओकलेर म महान् बन्न सक्दिनँ । हजारौं शब्दकोशबाट शब्दहरू सापटी लिएर पनि म तिम्रो बयान गर्न सक्दिनँ । म त तिम्रो अगाडि हरपल गौण नै हुन्छु । भन मन्याङगेरी फूलको रक्षा गर्न नसक्ने काँडाको अर्थ नै के हुन्छ र ? हो मन्याङगेरी हो नतर्साऊ अब मलाई... म नालाएक काँडा हुँ । फगत काँडा हुँ, सिङ नभएको काँडा ।
‘जाम्बो नोयल एन्ड मन्याङगेरी’ हामी किमारो आएको थाहा पाउँदैनौ । मन्याङगेरी र म किमारोलाई एकै साथ सोध्छौ ‘हवारी’ ।
किमारो जवाफमा बोल्न थाल्छ, ‘किन मन्याङगेरी किन ? त्यो काँडाले काँडालाई किन टोक्छ ? त्यो सिङले सिङलाई किन घोच्छ ?’ मरियममा आलश्य भएका गाईहरू हेर्दै उसले भन्यो ।
‘किन हामी एक अर्कालाई घृणा गर्छौं ? नोयल तिमीले मलाई सोधेका थियौ गरिब देशले गरिब देशलाई किन माया गर्दैन भनेर ? हामी विभक्त पारिएका छौं । धनको नाममा, छालाको नाममा, धर्मका नाममा र सिमानाको नाममा हामी विभक्त पारिएका छौ । र अझै पनि विभक्त पारिनेछौ । गल्ती हाम्रो पनि छ । दुई छाक खान पाउँदासाथ हामी घर खोज्न थाल्छौ अनि बैंक खोज्न थाल्छौ त्यसपछि हामी शक्तिको भक्ति गर्न थाल्छौ । मदिराको मातमा हामी पाशविक नृत्य नाच्न थाल्छौ । औपनिवेशिक मानिसकता लिएर हामी स्वतन्त्रताको नारा घन्काउँछौं ।’
किमारो धाराप्रवाह बोल्दै जान्छ । ‘मन्याङगेरी ब्रासिएस, मृत्युलाई कसले जित्न सक्छ र ? तर तिनीहरूले मृत्युलाई जित्न भन्दै अमर शब्द पैदा गरेका छन् । जाने त उहीँ हो एक्लै एक्लै । जन्मिने पनि यहीँ हो, यही धर्तीमा हो... । घृणा र प्रेम जे बोकेर जन्मिए पनि पाइला टेक्ने जमिन यही हो । हो मन्याङगेरी हो... हो ब्रासिएस मन्याङगेरी । तिमीले उत्तम बाटो रोज्यौं । जीवनका अनेकन मोडहरूमा आफ्नो अस्तित्वलाई सागरबाट उर्लिने छालले नुहाइदियौ । पवित्र बनाइदियौ । अन्धकारमय रातमा प्रेमको उज्यालो दियो बाल्यौ ।’
तिम्रो गमनसँगै मरियम सागर किनारमा अलपत्र पर्‍यो । आफ्नै पदचाप पहिल्यान नसकेर मरियम, हिन्द महासागरको बलौटे किनारमा थान्को लाग्यो ।
नतर्साऊ अब तिमी मलाई यी सपनाहरूमा... म त सपनासँग पनि डराउन थालिसकें । विपनासँग पनि भागिहिँड्न थालेको छु । प्रेम र घृणाबीच पनि भेद छुट्याउन सकिनँ । कालो र सेतोका भाषा नै बुझ्न सकिनँ ।
हिमाली टुप्पाबाट प्रसारित हुने चिसो बतास तराईका मैदानमा किन पुग्दैन मन्याङगेरी ? घाँटी नै न्याकिरहने यी सपनाबाट मुक्ति दिलाइदेऊ । निद्रा नै बिथोल्ने यी भयंकर सपनबाट छुट्कारा दिलाइदेऊ ?‘आशाको जीवनमामृत्युको आभामानआऊ तिमी,लिएर नौलो कथा ।’
अचानक म झस्किन्छु अनि सोच्छु गहिरो निद्राबाट ब्युँझिएर– यो कस्तो रंगमञ्चको यात्रा थियो । समयले त धेरै घाउहरू भरिदिन्छ रे ! अतीतका कडा स्मृतिहरू भुलाइदिन्छ रे ! तर मैले सकिनँ मन्याङगेरी । आज पनि म याद गर्छु । तान्जानियाबाट कोमरोस हुँदै फेरि अर्को मालबाहक पानी जहाज चढेर माडागास्करको महाजंगा पुगेको । यो यात्रा खाली खाली थियो किनकि जहाज पनि खाली खाली थियो । म आज पनि सोच्छु संसार यात्रामा कहिले काही फेरि पनि त्यही बाटो दोहोर्‍याउन नसकिने रहेछ । के तपाईंलाई थाहा छ लालुपाते फूलको पातलाई बीचबाट दोबारेमा माडागास्करको नक्सा बन्छ?
प्रकाशित : जेष्ठ २५, २०७६ ११:३४